Isikhala esingenalutho samaphayiphu senziwa nge-steel coil welding structure. Lokhu kuvamise ukuwafanela amavalvu ebhola anengcindezi yokuqamba engaphansi noma elingana no-5.0MPA (CLASS300). Lolu hlobo lomzimba we-valve lunesisindo esincane futhi umgodi wangaphakathi kulula ukuwucubungula, kepha kufanele kunakwe ngokukhethekile ukuhlelwa kwezimbambo ekwakhiweni ukuvimbela umgodi womzimba ekukhubazekeni. Insimbi ketshezi encibilikisiwe ngesikhathi senqubo yokuqhamuka kwendawo engagqwali izohamba ngokukhululeka. Ukuqinisekisa ...
Elingenalutho Valve Amabhola Umkhiqizi
Lokho Esikwenzayo? Xinzhan igxile ekukhiqizeni zonke izinhlobo eziyize valve amabhola ngokusebenzisa izinto eziningi ezahlukene. Ibhola elingenalutho lenziwa ngepuleti yensimbi eshisiwe noma amashubhu wensimbi angenasici. Ibhola elingenalutho linciphisa umthwalo wendawo eyisiyingi nesihlalo se-valve ngenxa yesisindo sayo esilula, esisiza ukunweba impilo yenkonzo yesihlalo se-valve. Kwamasayizi amakhulu noma ukwakhiwa okukhulu, ibhola eliqinile belingeke lisebenze. Amabhola e-valve angenalutho nawo angenza uhlobo oluntantayo noma i-tr ...
Ibhola elingenalutho linciphisa umthwalo wendawo eyisiyingi nesihlalo se-valve ngenxa yesisindo sayo esilula, esisiza ukunweba impilo yenkonzo yesihlalo se-valve. Kwamasayizi amakhulu noma ukwakhiwa okukhulu, ibhola eliqinile belingeke lisebenze. Amabhola e-valve angenalutho nawo angenza uhlobo oluntantayo noma uhlobo lwe-trunnion egibele, uhlobo lwezinhlobo ezimbili noma ezinhlobonhlobo. Izici ezimbili ezibaluleke kakhulu zamabhola e-valve zingukuzungeza nokuqedwa kobuso. Ukujikeleza kufanele kulawulwe ikakhulukazi ku-th ...
I-BOLAS HUECAS que se fabrican mediante chapa de acero soldada en espiral La bola hueca reduce the carga de la superficie esférica y el asiento de la válvula debido a su menor peso, lo que ayuda a prolongar la vida útil del asiento de la válvula.
Elingenalutho Valve Amabhola Factory
Amabhola angenalutho enziwe ngocwecwe lwensimbi olushiselwe noma amashubhu wensimbi angenasici. Ibhola elingenalutho linciphisa umthwalo wendawo eyisiyingi nesihlalo se-valve ngenxa yesisindo sayo esilula, esisiza ukunweba impilo yenkonzo yesihlalo se-valve.
Elingenalutho Three Way Valve Amabhola
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe - Ibalazwe L Iphethini Valve Amabhola , Izingxenye ze-Ball Valve, Amabhola For Valves , V-Shaped Valve Amabhola Umkhiqizi , L Uhlobo Valve Amabhola , A350 Lf2 Valve Ball ,